Icala elingajwayelekile likaStepmanía | Kusuka kuLinux
eliotime3000 | | Imidlalo
Sanibonani nonke. Namuhla ngiza ukuzokhuluma nawe ngomdlalo ohlobo lomdanso we-simulator okungenzeka uwudlalile, noma wezwa ngawo.
Kubizwa UStepmania, isebenzisa Ilayisense ye-MIT futhi okwamanje inguqulo yayo yesine egatsheni lokugcina kanye nenguqulo yesihlanu egatsheni layo elisha le-beta.
Ngaphezu kwalokho, kunomphakathi omkhulu wabasebenzisi nabanikeli abafaka izingoma, izinyathelo, futhi kukhona nenethiwekhi yabasebenzisi ababelana ngezikolo zabo futhi abavumele ukuletha abantu abaningi kulolu hlobo lwemidlalo yevidiyo eqale ngomculo wasenganekwaneni manje Ukudansa komdanso wokuguqula de Konami.
Futhi angizukukhuluma ngokunembile ngokuthi idlalwa kanjani, kepha ukuthi ikwaze kanjani ukusetshenziswa ngendlela yezentengiselwano, yize bekufanele idlule ezinkantolo ezidume kabi, futhi kamuva, "ukuhlengwa" yinkampani yaseNingizimu Korea engizokhuluma ngayo ngezansi.
2 Ukuqaliswa okunamandla ekuthengiseni kwayo
2.1 Kumishini ye-DDR
3 Kumishini ye-PIU
Ekuqaleni, lo mdlalo wevidiyo wazalwa njengo "mbumbulu" womdlalo oshiwo ngenhla Ukudansa komdanso wokuguqula, ngoba ngokujwayelekile, i-DDR ibitholakala kakhulu emishinini ye-arcade njengakuma-consoles afana ne-PlayStation kanye / noma i-XBox neNintendo.
Futhi ngesikhathi sesiphumile IStepManía, bezingekho izinhlobo ezisemthethweni ze-DDR ze-PC, ngakho-ke baphendukela kumthombo ovulekile futhi inguqulo ngaleso sikhathi yayiyinhle kakhulu.
Ngokuhamba kwesikhathi, abalandeli begeyimu yevidiyo Pump it up Banikeze namasenti abo amabili ukusebenzisa imishini yalo mdlalo (ngokungafani ne-DDR esebenzisa imicibisholo engu-4, i-PIU isebenzisa iphaneli lemicibisholo emi-5 esesimeni sekhaba, lapho ivumelana khona nanoma yisiphi isitayela somdanso) .
Ngenxa yalokhu, abalandeli be-DDR abanjengo-PIU benze izingoma ezidlalwayo zezingoma zabo abazithandayo, futhi benze nemikhiqizo yabo yomculo badlala ngoStepmanía.
Ukuqaliswa ezimangelengele ekuthengiseni kwayo
Ukuqaliswa kwayo ngokusemthethweni emishinini ye-DDR bekungaphezu kokujabulisa nje, ngoba inkampani engaphansi kukaKonami yase-US yiyo ebithikameza ukuqaliswa kwalo mdlalo wevidiyo kwimfoloko yawo yezentengiselwano ethandwa kakhulu, ebizwa Emgodini, eyazalwa njengesixazululo sokwesekwa kwezobuchwepheshe okumpofu kakhulu uKonami ayinika imishini yokudansa ye-DDR eNtshonalanga, ngaphezu kokuba yathandwa ngenxa yobunzima obuphakeme obabunabo ngokungafani nomdlalo wokudansa we-Konami osuvele wabalulwa.
I-Roxor Games, umsabalalisi omkhulu walo mdlalo, ubephethe ukufaka lo mdlalo kumishini ye-DDR e-United States, okuyisona sizathu esenza uKonami anqume ukwenza uchungechunge lwamacala nezinsolo zamalungelo obunikazi ukuze amise ukunwetshwa lo mdlalo wevidiyo.
Andamiro Ezokuzijabulisa, inkampani eyinhloko yaseNingizimu Korea ephethe umdlalo wevidiyo Pump it up, isekele abathuthukisi be-ITG ngokunikezwa kwehadiwe edingekayo ukuze kube lula ukusatshalaliswa komdlalo ngamapaki okuzilibazisa.
Noma kunjalo, ngo-2006, uKonami wathatha amalungelo egama lomdlalo wevidiyo kepha hhayi ekuqoqweni kwezingoma, isizathu esiyinhloko sokuthi kungani kwakungekho isitolimende sesithathu (futhi kwanikela ngemakethe yemishini ye-arcade eNtshonalanga), futhi u-Andamiro naye enze uchungechunge lwama-PIU spin-offs ngokususelwa kumdlalo wevidiyo oshiwo kakhulu.
Futhi sengathi lokhu bekunganele, omunye wabalandeli be-ITG ukwazile ukwenza uhlobo lomthombo ovulekile olulungele ukuguqulwa kanye / noma ukuthuthukiswa ngumphakathi obiziwe I-OpenITG, etholakala nge-OSX, Windows, ne-GNU / Linux.
Ngemuva kokuhlushwa umzamo omkhulu ngemishini ye-DDR neKonami e-United States, u-Andamiro walusukumela lolu daba futhi wabiza abathuthukisi be-ITG ukuthi bakwazi ukuguqula umdlalo wevidiyo wemishini ye-PIU.
Kusukela ngaleso sikhathi, kwazalwa iPaga It Up Pro saga, ebisaziwa kakhulu ngokukhulisa izinga lobunzima balo mdlalo wevidiyo, ngaphezu kokukhulisa ikhathalogi yengoma ye-ITG ukujabulisa abaningi.
Kodwa-ke, ngoba abanye abalandeli be-PIU babenemizwa exubekile naleyo saga, ngakho-ke abanye babaculi abasebenzela ukwakhiwa kwe-ITG bahlala ukusebenzisana no-Andamiro ukuthola isitolimende esilandelayo se-PIU ngokususelwa kumdlalo wevidiyo oshiwo kodwa isigaba se-alpha (ngamanye amagama, bazosebenzisa iStepmania 5 Alpha ukuthuthukisa umdlalo wevidiyo oshiwo).
Ngemuva kokwethulwa esimweni se-beta emidlalweni yemidlalo yokuzijabulisa, ekugcineni, ngoJanuwari 2013, yethulwa Pump It Up Okungapheli, enesici esifanayo nezinguqulo zamazwe omhlaba ezenziwe eSouth Korea kepha ngesitayela somculo esihluke kakhulu kuzinguqulo ezifana ne-saga Fiesta nokugcina ubunzima obusezingeni eliphakeme ababenabo ababengaphambi kwabo.
Ekupheleni kosuku, lo mdlalo wevidiyo ugcine ukwazile ukuzimela ezinhlangothini zombili, ezingeni lomphakathi nasezingeni lokuhweba, futhi yize wena. Ungakukholwa, imishini yokudansa esebenzisa lezi zinguquko zentengiso zikaStepmanía ziyayisebenzisa I-Debian GNU / Linux njenge-Shumekiwe SO:
Yilokho okwanamuhla. Ngethemba ukuthi usithokozele le ndatshana encane ebekelwe lo mdlalo owaziwa kakhulu we-Open Source nokuthi hhayi i-Valve kuphela ebheja ku-Linux emidlalweni yayo yevidiyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » Icala elingajwayelekile likaStepmanía
O_O bengingamazi. Ngikhumbula ngenkathi ngiwumuntu othanda ukudlala iPlayStation 1, kwakukhona umdlalo wokudansa engangiwuthanda kakhulu (manje angisalikhumbuli igama) .. Kuleli sonto ngizozama ukuzama ukubona ukuthi kusebenza kanjani
Ukuqhuma iGroove? Yebo, ngiyidlalile ku-emulator, kepha njengamanje amakhophi ayo e-F2P aziwa nge-LoveRitmo (asatshalaliswa nguSoftnyx), kanye ne-Audition (Isatshalaliswe ingosi yomdlalo ye-Axeso5.com). Futhi ngendlela, iBust A Groove inhle kakhulu, kepha bekungekho ndlela yokuyivumelanisa kahle nephedi ye-DDR.
Nginayo, ngaphandle ngangivame ukudlala i-arcade, impela i-Revolution 2, nginezingu-2 zazo enhlokodolobha yaseMadrid (eyodwa esePuerta del Sol kanti enye isenxanxatheleni yezitolo iLa Gavia, endaweni yaseLas Suertes / Gavia ngokuhamba kwesikhathi de Vallecas), yize bengingadlali isikhathi esithile futhi ngelinye ilanga ngazama, kepha angikwazanga ukushaya i-arrows XD
Futhi umata wokudansa, odlula egumbini lokubeka, mhlawumbe ngolunye usuku ngingaphinde ngiwukhuphule
Mina, ayikho imishini embalwa ye-DDR eseduze nedolobha engihlala kulo (i-Villa María del Triunfo, iLima, iPeru), futhi ngeshwa, zombili zisebenza ne-ITG. Ngemicibisholo, ngiyishaye yaya ezingeni le-7 (yomibili imishini ye-DDR ne-PIU), kepha kusukela ezingeni le-8, njengoba imilenze ingikhaphela futhi nezinga lomzamo womzimba liphakeme kakhulu ku-PIU (nokuningi Cardio ku-DDR).
Angikaze ngenyuke ngivela kokujwayelekile, akunakwenzeka kimi.
Ngale ndlela, esiteshini sami se-Youtube ngilayishe amavidiyo amaningi omqhudelwano omncane esasiwenza eminyakeni eyedlule, lapho usoseshini uqala, ngeRevolution 2 nje kwesinye isikhungo sezitolo eMadrid (impela iNyanga egcwele, kwenzeka ukuthi ngiphawule ngalokho) uma kwenzeka ufuna ukubona, uze ungeze okunye ku-athikili ^^
Uxolo, bengisho ukuthi Kunzima
Ukubuka amavidiyo we-DDR, kubonakala kimi ukuthi ileveli “enzima” iyafana nezinga le-ITG 6/7, ngakho-ke ngiyakwazi ukushaya imicibisholo ngephedi.
Noma kunjalo, ngiyethemba ukuthi ngingadlala ku-DDR yangempela (uma ngingayithola, kunjalo).
Kulungile, ngiyihlanganisa kanjani kwiLinux Mint yami, ePetra?
Esizeni esifanayo seStepmanía, ikunikeza zombili izinhlobo esezihlanganisiwe futhi zilungele ukusebenza kanye nekhasi le-Google Code ukuze ukwazi ukusebenzisa ikhodi yomthombo nokuyihlanganisa, futhi uhlanze izimbungulu (uma uzithola).
Noma kunjalo, umdlalo usebenza kangcono kwi-Linux kune-Windows uqobo.
I-athikili enhle kakhulu, ifundisa kakhulu.
ngendlela u-Elav azilungiselela ngayo ukushiya i-Arch cishe lapha.
Ngiyawuthanda lo mdlalo, sengivele ngifundile ukuhlola yonke imisebenzi yawo yokuguqula ingemuva, kufaka phakathi izingoma nokwenza izingoma zami. Kodwa-ke, into ebihlala ingikhathaza ukwazi ukuthi isungulelwe yiphi isoftware, njengoba kungathokozisa ukudala uhlobo lwami lomdlalo, ngakho-ke uma kukhona owaziyo ukuthi lwakhiwe kanjani futhi ngaluphi uhlelo, ngiyalujabulela ulwazi.